အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကြက်ဥ ဆန်ပြုတ်ငံ
တခါလာလဲ အသားဆီပျံ တခါလာလဲ ကုန်းဘောင် ဆီတဝင်းဝင်း တခါလာလဲ ကြက်သားမှို တခါလာလဲ ဘာသား ညာသား တော်ပါပြီ အရပ်ကတို့ရေ အီပြီတော့ အီပြီ လို့ သာ ကိုဖေ့ လို လမ်းဆုံကနေ မန်းတုန်အောင် ကုန်းအော်လိုက်ချင်တော့တယ် သွားကျိုး အဆိုတော်ကတော့ လမ်းဆုံမှာ....ဘာဘာ ညာညာ ဆိုပြီး သီချင်း ဆိုလေမလား...........ကိုယ်ကတော့ တကယ်ပြောတာပါ တခါတခါ အသားတွေကို တကယ် အီ ပြီး စိတ်ကုန်လာပြီ.........တသက်တာပတ်လုံး သက်သတ်လွတ်ပလိုက်ရရင် ကောင်းမလားလို့တောင်မှ တခါတခါ တွေးမိတယ် တကယ် အဟုတ် ဘုရားစူး မိုးနတ်မင်းကြီး အသိ.......
သုို့သော် လည်း အခါများစွာတွေမှာတော့ ဝက်တကောင် က အွိုင့် အွိုင့် တို့ ကြက်တကောင်ကောင် က ကတော်ကတော်တို့ လာလုပ်ရင် အသံ ကိုတောင် ပြေးကိုက်ချင်မိပြန်ရော်.......အဟိ
ထားပါလေ ခုတော့ တခါ ပုံဆန်းကလေး နဲ့ အများကြည်အောင် တင်ဆက်အုံးမှာက ရွာစားရေ.........
ဆန်ပြုတ် အငံပါတဲ့တော့............. ဂလိ ဂလိ ပလို့ဂျိ.........
မောင်ကတော့ ဆန်ပြုတ် ဆို ဘယ်လိုပြုတ်ပြုတ် မကြိုက်ပါဘူး ကိုယ်ကတော့ သူနဲ့ ပြောင်းပြန် ဆန်ပြုတ် ဆို ဘယ်လိုပြုတ်ပြုတ် ကြိုက်တယ် ကဲ ဘယ်နှယ့်လဲ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆို ပြောကြစမ်းပါအုံး ဥာဏ်များတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ ............
(သိပါတယ် အရီးလေးမြ အသံကြီးများ.....)
ကဲပါလေ ရယ်စရာမရေးတာကြာလို့ ရေးလိုက်ပါတယ် စိတ်လဲကြည်နေတာနဲ့ ....
ချက်ရပြုတ်ရတာ သိပ်လွယ်တယ် စားရတာလဲ လွယ်တယ် တီက ကြိုက်လဲ ကြိုက်တော့ ခဏခဏ ချက်စားပါတယ် နေမကောင်းမှ စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ သွားရည်စာ လိုမျိုးပါ တအိုး အကြီးကြီး လဲ ချက်ထားပြီး တယောက်ထဲ တစွပ်စွပ် စားနေတတ်တာပဲ ပန်းကန်ကြီး နဲ့ ထည့် အစာပလာတွေ ထည့်ပြီး ဇွန်းတပ်ပြီး တီဗီရှေ့ ဒါမှမဟုတ် ဝတ္ထု တအုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စားတော့တာပဲ တဇွန်းခပ်စားလိုက် စာရွက် လှန်လိုက်ပေါ့......ကဲ ခြေဆင်းတွေ ကို ဒီမှာတင်ရပ်လို့
ဒီအချိန်ဆို ဆန်လုံးလဲ တော်တော်ကွဲလို့ ဆန်ပြုတ်က စေးစပြုနေပါပြီ ခုန က ပုစွန်ခြောက် ထည့်ထားလို့အနံလေးကော ငံတန်တန် အရသာလေးပါ ရစပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆန်ပြုတ်ထဲကို ဆီနဲ့လှိမ့်ထားတဲ့ မှိုကြော်လေးထည့်ပါ ပြီးရင် ဝက်သား နယ်နှပ် ကို ထည့်ပါ ကြက်ဥ ကြော် ကိုထည့်ပါ ပြီးရင် သမ မျှတ အောင် ယောက်ဇွန်းအကြီး စားနဲ့ မွှေပေးပါ အကုန် မျှ ပြီဆိုရင် ဆား အချိုမှုန့် ခပ်ပြီး အရသာ ချို ပေါ့ ငံ မြည်းပါ လိုတိုး ပို ရေ နည်းနည်း ရောပါ ဒါက ရေးနေကျ စကား အဖြစ်ရေးတာနော် ရေရောစရာ မလိုအောင် အစကတည်းက နည်းနည်းချင်းစီ မှန်းထည့်ပေါ့ တီက ဦးကြီးပု မဟုတ်တော့ လက်မှန်းနဲ့ ပဲ ရမ်းပစ်ပါတယ် “ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကတွပ်ပီပေါ့...”
ကြိုက်တတ်ရင် တရုတ်နံနံလေးတွေလက်တစစ် အရွယ်လောက် ဖြတ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါအုံး မွှေးတာပေါ့ တီကတော့ မကြိုက်လို့ မထည့်......
အရေးကြီးတာ တချက် ပြောပါမယ် သေချာမှတ်ပါ ဒီလို ချက်တဲ့ ဆန်ပြုတ် ကို ခပ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းနဲ့ အကြီးအကျယ် မမွှေပါနဲ့ ဆန်ပြုတ်က ရေထွက်တတ်ပါတယ် သာသာလေး ကိုယ်စားချင်သလောက်ကို သာ ခပ်ပြီး ပန်းကန်ထဲထည့် တွယ်ပါ အဲ့တာမှ ထားလို့ ကောင်းပါတယ် ခဏခဏ ပြန်ပြန်နွေးရင်လဲ ဆန်ပြုတ်ကနေ ဆန်ပြဲ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ် သတိမှတ်စရာ အချက်တွေပါပဲ.....
Posted by တီချမ်း at 4:22 PM
Labels: ဆန်ပြုတ်, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း
DSNW May 11, 2011 at 5:45 PM
Wonder who cooked this? ;)
DSNW May 11, 2011 at 5:47 PM
Whoever cooked this, this attract mealot. Must cook that for myself soon.
Anonymous May 11, 2011 at 6:04 PM
ဖူးခက် ပုံလေးတွေလဲ တင်ဦးနော်
EEK May 11, 2011 at 10:11 PM
ဆန်ပြုတ်တော့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားလို့ဆုတ်ပြန်သွားပါတယ်။
ဖူးခက်ကို ဘယ်နေ့ ရောက်မှာလဲ။ တို့ တော့ ဘန်ကောက်ကို ၁၆ ရက်နေ့ ည တက်ဖြစ်မယ်။ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်မှ ပြန်ရောက်မယ်။ တွေ့ လို့ ရရင် တွေ့ ချင်သား။
တီချမ်း May 12, 2011 at 9:21 AM
ဟယ် မအိ ကလဲ ဆန်ပြုတ် ပုံပြင်မကြားဖူးဘူးလား
၁၇ မနက် စောစော လေယာဉ်နဲ့
၂၀ ည မိုးစုန်းစုန်းချုပ် မှ လေယာဉ် နဲ့ ပြန်လာမယ် ဆိုတော့ ၂၁ ရက် မနက်စောစော အလွန့်အလွန်စောရောက်မယ်
၂၁ ရက်နေ့ တွေ့လို့ ရတယ် အမ
အမ ကို ထမင်းကျွေးမယ်လေ ဖုန်းဆက်မယ်
တီချမ်း May 12, 2011 at 12:00 PM
this is me doing something fun when i am amused
and this is something i would love to get applaused for